I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux
Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet uhlelo lokusebenza oluthokozisayo olusivumela ukuthi sigxile esimweni se Isitolo esiku-inthanethi izicelo ezahlukene futhi ewusizo for yethu Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile, kusekelwe kumafomethi amasha wokufaka ahlukile (I-Flatpak, i-Snap ne-Appimage) kuyatholakala.
Ngakho-ke Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet Kusukela ekudalweni kwayo yakhelwe njengesitolo sohlelo lokusebenza esiphefumulelwe insizakalo yakudala online ye Isitolo Sezinhlelo Zokusebenza ze-Linux (https://linuxappstore.io/) lokho akusasebenzi. Ngaphezu kwalokho, isikhombimsebenzisi sayo esilula futhi esinobungane sikuvumela ukuthi useshe kalula, ulande futhi ufake izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa ukusatshalaliswa okuningi kwe- I-GNU / Linux.
Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet uhlelo lokusebenza oluhle olusivumela okwamanje, ukugwema ukuvakashela kanye / noma ukusebenzisa i-Web Stores yezinhlelo zokusebenza ezenziwa online, njenge:
Futhi ezinye zaziwa, zifana kakhulu, njenge:
Izinhlelo zokusebenza ze-Linux
Lokho kusebenza ngokufaka izinhlelo ezifanele noma izengezo ngohlelo I-OCS-Url. Kamuva sizokhuluma ngalezi ezinye izitolo futhi sathi isicelo I-OCS-Url.
1 I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza
I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza
Ukulanda Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet kumele siye kwakhe Iwebhusayithi esemthethweni bese uyilanda ngendlela esiyithandayo noma oyidingayo. Okwamanje iyatholakala ngezindlela zokufaka ezilandelayo:
.esimo (68.2 MB)
Esifundweni sethu samacala, sizolanda iphakheji kufayela le- ifomethi .deb ukufakwa nge-terminal.
Lapho iphakheji selilandwe kufayela le- ifomethi .deb siyaqhubeka ukuyifaka nge-terminal sisebenzisa i- umyalo "dpkg", Ngokulandelayo:
Uma ifakiwe, ingenziwa kusetshenziswa isinqamuleli esenziwe kufayela le- isigaba semenyu «Izesekeli». Noma kusuka esigungwini ngokusebenzisa i umyalo "i-app-outlet". Uma kungenziwa ngendlela yokuqala, kungenziwa ngendlela yesibili ukubona uhlobo lwephutha esiboniswa yi-terminal.
Yebo ngokusebenzisa umyalo olandelayo:
Umlayezo wephutha uyakhonjiswa:
Zama ukusebenzisa imiyalo elandelayo:
Bese ubuyisela kabusha i-Prompt yomyalo:
Uma yenziwa kahle kusuka ku-terminal, izophinda futhi yenziwe kahle kusuka kumenyu. Umugqa womyalo sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 kufanele iqhutshwe njalo ngaphambi kokuyisebenzisa, ngaphandle kokuthi ihlelwe ku iskripthi noma umsebenzi ohleliwe ekuqaleni (ukuqala) kwe- Isistimu yokusebenza.
Kanye ukubulawa nokuqala ngaphandle kwezinkinga Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet isikhombisa ifasitela elinezinto ezilandelayo:
Ibha yokusesha: Ukuthola izinhlelo zokusebenza ezibhalisiwe ngokufanisa iphethini yokusesha negama layo noma incazelo.
Imenyu: Inokukhethwa kukho okungu-4 okuyiKhaya, Izigaba, Izilungiselelo nokubandakanywa.
Iphaneli yezicelo: Lokho kukhombisa imigqa emi-3 ebizwa ngezinhlelo zokusebenza ezidumile (Izinhlelo zokusebenza ezidumile), Ezisanda kuvuselelwa (Ezisanda kuvuselelwa) nokukhishwa okusha (Ukukhishwa okusha).
Ngamafuphi, ku Uhlelo lokusebenza lwe-Outlet isinikeza uhla oluhle kakhulu lwezicelo zokwazi, ukufaka nokuhlola.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" ngalolu hlelo lokusebenza oluthandekayo olubiziwe «App Outlet», esivumela ukuthi sigxile endaweni ethile ye- Isitolo esiku-inthanethi izicelo ezahlukene futhi ewusizo for yethu «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» ngokususelwa kumafomethi amasha wokufaka ahlukile (I-Flatpak, i-Snap ne-Appimage) iyatholakala; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux
Sawubona, muva nje ngizamile ukuhlola uhlelo lokusebenza kuhlelo lokusebenza
ngathola iphutha elifana naleli olishoyo futhi ekugcineni ngaya phambili ngalivivinya, angizange ngiqale ukuphenya ukuthi le nkinga ingaxazululwa kanjani.
Liyini leli phutha ngenxa? Kubukeka sengathi ngibhampa ukwenza lokho ukusebenzisa uhlelo. Ayikwazi ukuxazululwa ngenye indlela?
Sanibonani Jony127! Zama ukusebenzisa lokhu noma olunye uhlelo lokusebenza "/ opt / App Outlet / app-outlet" –no-sandbox% U kusuka kusinqamuleli noma i-terminal enjengale. Inketho ye -no-sandbox igwema ukuthi usebenzise umyalo weSudo sysctl kernel kuqala .unprivileged_userns_clone = 1
Yebo, ngaleyo nketho ngingayikhipha ngaphandle kokusebenzisa noma imiphi imiyalo yangaphambilini, umbuzo wami uthi, lokhu kungakuthikameza ukuphepha kohlelo? Ngiyaqonda ukuthi ngaloyo myalo uhlelo lokusebenza lusebenza ngaphandle kokuvikela i-sandbox.
Impela, uma uyigijimela ngaphandle kwe-Sandbox umuntu angavezwa ekuhlaselweni, yize ngicabanga ukuthi kumsebenzisi ojwayelekile futhi ikakhulukazi kumsebenzisi we-GNU / Linux, kungenzeka okuncane kakhulu, noma kungenzeka. Ngokwabanye, ngizoqhubeka nokuphenya imbangela nesisombululo.
Sanibonani Jony127! Uma uqonde iphutha elixazululwa ngalo mugqa womyalo:
I-sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1
Ngemuva kokuphenya kahle ukuthi yini eqondisayo noma ukuthi ngiyishintsha kanjani, iqiniso ukuthi angikwazanga ukuthola okokuqala futhi konke engikuthathe okwesibili bekungasizi ngalutho. Noma yini, ngethemba ukuthi omunye umfundi usilethele ukukhanya ngalokhu.
Isinyathelo senzelwe ukuhlanganisa umsebenzi phakathi kwe-openSUSE Leap ne-SUSE Linux Enterprise
I-Zoom imangalelwa ngomunye wabaninimasheya ngezinkinga ababhekene nazo njengamanje